विश्वकै सबैभन्दा धेरै अर्वपति कहाँ ? - TESTING NEWS
Edit by Krishna Pyasi...
Home / Interesting affair / विश्वकै सबैभन्दा धेरै अर्वपति कहाँ ?
विश्वकै सबैभन्दा धेरै अर्वपति कहाँ ?
फागुन १४ – शक्तिशाली र धनी राष्ट्र बन्न विश्वमा निकै प्रतिस्पर्धा भैरहेको पाइन्छ । आफूलाई अर्को राष्ट्र भन्दा अब्बल र शक्तिशाली बनाउने होडबाजी चलिरहेकै बेला एउटा यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ, जसले विश्वमा सबैभन्दा धेरै अर्वपतिको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार चीनको राजधानी बेइजिङ विश्वकै सबैभन्दा धेरै अर्वपति बसोबास गर्ने शहर बन्न सफल भएको छ । चीनलाई आधारभूमी बनाएर काम गर्दै आएको संस्था ‘हुरुन’ले निकालेको प्रतिवेदन अनुसार बेइजिङ अमेरिकाको न्यूयोर्कलाई उछिन्दै सबैभन्दा धेरै अर्बपतीको शहर बनेको हो । बेइजिङमा अहिले एक सय जना अर्वपतिहरु बस्दै आएका छन् भने न्यूयोर्कमा ९५ जना मात्रै छन् ।
गएको वर्ष बेइजिङमा ३२ जना नयाँ अर्वपति थपिएका थिए भने न्यूयोर्कमा चारजना मात्र थपिएका प्रतिवेदनले जनाएको छ । चीनमा गत बर्ष ९० जना थपिएपछि त्यहाँ अर्वपतिको संख्या ५ सय ६८ पुगेको छ । न्यूयोर्कमा यो संख्या ५ सय ३५ छ । तर शीर्ष दश जनाअर्वपतिको सूचीमा भने अमेरिकीहरुको बर्चश्व कायमै छ ।
श्रोत - उज्यालो अनलाईन
छुट्यो समुद्रको सबभन्दा ठूलो पानी जहाज (पहिलो यात्रामा सबभन्दा ठूलो जहाज)
गजल - प्रदिप चापागाईं
धर्मको अपमान गर्दै खादाले गोप्य अंग छोपेको होइन: नायिका
निरोगी बन्न डाक्टरका ३३ सुझाव
कविता लेखेकै कारण मृत्युदण्ड सुनाइएका एक कवि
Interesting affair (5)
abroad (4) analysis (2) economy (5) entertainment (4) extra (4) health (10) Interesting affair (5) literature (7) news (15) photo (4) social (7) sports (5) technology (4) video (5)
Copyright and Design By - Krishna Pyasi.